Ahoana ny fomba hitantanana ny Glances amin'ny Apple Watch | Applelised | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba hitantanana ny Glances amin'ny Apple Watch
Applelised | | Apple Watch, About us, Tutorials
El Apple Watch manana endri-javatra vaovao antsoina hoe Fahitana o Glances, fomba vaovao iray ahazoana ny vaovao tadiavinao matetika ary anio dia asehonay anao ny fomba fitantanana azy io mba hitrandrahana tsara.
Mandrakizay miaraka amina paompy iray fotsiny amin'ny Apple Watch anao
Notifications y Fahitana dia toetra roa samy hafa be ao amin'ny Apple Watch. Raha ny Notifications dia ny fampandrenesana tonga amin'ny famantaranandronao isaky ny mahazo antso, hafatra, mailaka, sns. Fahitana mamorona fomba fanao vaovao izay ahafahanao, amin'ny nahim-po, manatona ny fampahalalana izay tadiavinao matetika.
Ity fampiasa ity dia mampiseho anao famintinana ny fampahalalana izay matetika no dinihinao. Mikosoha ary zahao ny toetr'andro, zahao ny fandaharam-potoana na mitadiava ny làlanao amin'ny sari-tany. Azonao atao ny mamaky haingana ao anaty ny fandikana ary manokatra ny rindranasa misy paompy. (Manzana)
Ity fisehoan-javatra vaovao ity izay, a priori, dia mety ho tena tsotra, kanefa toa mitera-doza amin'ny fanovana lehibe momba ny fomba fampahalalana azy ireo; raha ny tena izy, The New York Times vao haingana no niresaka hevitra vaovao momba ny asa fanaovan-gazety izay mipoitra miaraka amin'ny famantaranandro paoma ary izany dia hidika ho "fomba vaovao fitantarana tantara", ny Ny asa fanaovan-gazety indray mipy maso. Araka izany, Maso amin'ny Apple Watch izy ireo dia mety ho lasa manan-danja kokoa noho ny toa azy ireo amin'izao fotoana izao ary noho io antony io dia hianarantsika hitantana azy ireo amin'ny fomba tena tsotra.
Hanampiana, hanala ary hanamboatra indray Fahitana dia ilaina ny mampiasa ny fampiharana ny Apple Watch amin'ny iPhone-nao. Avy amin'ny efijery lehibe an'ny app Apple Watch, mikorisa etsy ambany mba hahitana ny lisitry ny rindranasa ary tsindrio ilay fampiharana tadiavina hijerena raha manana "Glances" ity.
Raha hametraka ny fampiharana amin'ny famantaranandronao dia ampifamadiho amin'ny «ON» ilay misafidy ary hampavitrika ny Glance, raha misy araka ny fampiharana dia ampandehano ny safidy «Asehoy ny fahitana».
Raha te-handamina indray ny Glances dia miverena amin'ny efijery fampiharana lehibe Apple Watch ary kitiho ny Glances (eo amin'ny sary, "Glaces") eo ambany.
Ity sary manaraka ity dia mampiseho izay Topazo maso mijery ny Apple Watch ary ny baikonao. Mba hanovana ny filaharana mifanaraka amin'ny tsiro sy ny filanao dia tsy maintsy manaraka ny fizotranao manaraka ihany ianao mba hametahana sy hanafarana widgets ao amin'ny foiben'ny fampandrenesana ny iPhone: tsindrio ary tazomy ny tandindon'ny tsipika marindrano telo hisintomana sy hanamboarana ireo fahitana. Mba hanesorana haingana ny Glance avy ao amin'ny Apple Watch tsindrio ny mari-pamantarana miiba mena (-) ary, raha ampiana, ny bokotra maitso miampy (+), samy eo ankavia amin'ny anaran'ny fampiharana tsirairay. Ny hany mason-tsivana tsy ho azonao fafana dia ny Fikirana.
Araka ny hitanao, ary toy ny mahazatra amin'ny vokatra rehetra Paoma, el dingana Tsotra be ilay izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fomba hitantanana ny Glances amin'ny Apple Watch
Niakatra indray ny tsaho momba ny iPad Pro mety hitranga
Apple Watch dia miteraka fahasosorana amin'ny hoditra sy ny fihenan'ny alikaola amin'ireo mpampiasa sasany